Ungase ubone eziningi tutorials ekutshela indlela baqede ifoni yakho noma ithebhulethi, kodwa akuvamile basho noma yimuphi izingozi ezingaba khona. Ngakho lesi sihloko uzokuphendula eminye imibuzo mayelana nezingozi kucedvwa.
Ngenzenjani bazuzani ukhula lwenkohlakalo egcwele?
Vula bootload yakho
Indlela baqede idivayisi yakho ye-Android
Indlela isipele ifoni ye-Android
Ingabe ezingadala isitini kudivayisi?
Yebo, kungenzeka. Njengoba udlala ngamafayela uhlelo lwakho ongayenza ugijima ingozi bricking ifoni yakho (ifoni iyenziwa i engasebenziseki isimo okulingana isitini). Kodwa kufanele kube Cishe kwakungenakwenzeka uma ulandela imiyalelo ngokucophelela. Uyazi, lapho kuthiwa amashumi ezinkulungwane Abasebenzisi Android baye kunezimpande amafoni abo ngempumelelo. Ngisho noma ngempela isitini wena ifoni, ke kungenziwa zibuyiswe 99% sezikhathi nje agqoke omunye firmware noma ukubanika emuva firmware isitokwe.
Ingabe-ke isiqinisekiso yami?
nakanjani. Kodwa ezimweni eziningi unayo ithuba lokubuyisa ifoni yakho ngombandela wokuthi awusoze wazi ukuthi ibangelwa ifoni yakho. Futhi ngezinye izikhathi abazi ngisho uhlole ukuze ubone uma simile ifoni yakho uma ubuyela ke.
Will I ayeke ukuthola izibuyekezo?
Not, kucedvwa ngeke ayeke uthole nanoma yiziphi izibuyekezo. Uma baqede bese ugcine isitokwe ROM noma flash a ROM isitokwe, ngeke usathola Ota buyekeza (kodwa egijima isibuyekezo ngeke un-impande ifoni yakho). Futhi uma ukukhanya a ROM ngokwezifiso, ungase futhi ukuthola izibuyekezo ayo njalo (njenge CyanogenMod, Pananoid).
Ingabe amaphoyisa ibonise up at Isicabha sami sangaphambili ngosuku olulandelayo?
Not, ukhula lwenkohlakalo egcwele efonini yakho akuyona emthethweni. Ngakho ungakhathazeki ngalokhu. Ngaphandle, owazi it!
Kukhona enye into okufanele ngiyazi ngabangane ukhula lwenkohlakalo egcwele?
Not, Ngempela, ukhula lwenkohlakalo egcwele kuyinqubo kuqhathaniswa kobuhlungu nge eziningi zalezi “lula okukodwa (a)amathuluzi impande” futhi ngisho nangalesosikhathi kukhona plethora uyasiqondisa futhi usizo Xda ukukuqondisa bese uxazulule izinkinga ongase ube. Kodwa uma niyajabula nefoni yakho ngendlela nje kuba, ke ungalilahli impande.
Ukuze ufunde indlela baqede, sicela yokufunda mayelana idivayisi yakho ibhayibheli Android: Xda-Onjiniyela.
Posted on July 7, 2015 Agasti 26, 2015 Umbhali WillIzigaba Umsuka Amadivayisi AndroidAmathegi impande android
Langaphambilini post Previous: Ngenzenjani bazuzani ukhula lwenkohlakalo egcwele
Next post Next: Indlela baqede ifoni yakho Android ne-tablet